Nooca Delta | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Xaqiiqooyinka ku saabsan Korona Fayraska (COVID-19) iyo Nooca Delta
Heerarka caabuqa COVID-19, oo ay ku jiraan kuwa ka dhex jira qoyska oo dhan, ayaa sii kordhaya. Waxay ku taliyeen Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada,Ururka Caafimaadka MaraykankaiyoAkademiyada Maraykanka ee Dhakhaatiirta Carruurta in qof walba, oo ay ku jiraan dadka da'doodu tahay 2 sano jir ama wixii ka weyn, inay xirtaan maaskarada wajiga, masaafo isku jirsadaan oo gacmaha si joogto ah u dhaqdaan si loo dhimo fiditaanka fayraska. Waxaa sidoo kale lagula talinayaa in qof kasta oo heli karaTallaalka COVID-19 ee ay FDA oggolaadeeninuu mid qaato, kaasoo kaa caawin doona adiga iyo dadka aad jeceshahay inuu kahortago jirro halis ah iyo dhimashada la xiriirta COVID-19.
6 xaqiiqooyinka ay tahay in la ogaado ee ku saabsan Korona Fayraska (COVID-19) iyo Nooca Delta
Kala duwanaanshaha nooca Delta ee COVID-19 wuxuu u fidaa si ka sahlan noocyada kale ee fayraska. Waxaa laga yaabaa ku dhawaad 2-laab inuu ka faafitaan badan yahay noocyadii hore.
Dadka aan la tallaalin ayaa halis badan ugu jira. Iyadoo dadka la tallaalay laga yaabo inuu ku dhaco COVID-19, xogtu waxay muujinaysaa in tallaalada COVID-19 ay FDA oggolaadeen inay gacan ka geystaan kahortagga jirro halis ah iyo isbitaal-dhigis. Kuwa ugu jira halista ugu sarreysa inay aad ugu jirradaan fayraska, iyo faafiyaan fayraska, waa dadka aan laga tallaalin COVID-19.
Dadka, oo ay ku jiraan dadka da' yarta ah, si degdeg ah ayay u jirranayaan. Iyadoo dad badan oo waayeel ah la tallaalay,dadka da' yarta ah ayaa si xun ugu jirranaya fayraska.
COVID-19 wuu sii socon doonaa inuu isbeddelo. Habka ugu wanaagsan ee hoos loogu dhigi karo soo bixida noocyo cusub waa inaad naftaada ilaaliso adiga oo xiranaya maaskaro oo qaadanayo tallaalka COVID-19 marka aad heli karto.
In ka badan 1 ka mid ah 4 qof ee qaata COVID-19 wuxuu yeelan doonaa astaamo xitaa 4 toddobaadyo kadib. Iyadoo dadka intooda badan ay uga bogsadaan COVID-19 toddobaadyo gudahooda markay jirradaan, dadka qaarkood ayaa la kulma xaaladaha COVID-19 kadib ee socda 4 toddobaad ama in ka badan kadib caabuqa.Daraasado dhowr ah oo dhowaan la sameeyay ayaa muujinaya in inta u dhaxaysa 27-33% ee bukaanada qaada COVID-19 aan isbitaalka la dhigin ay yeesheen astaamo waara, iyadoo loo eegayn da'dooda, caafimaadkooda hore ama darnaanta caabuqa haya. Iyadoo wax badan aan weli la ogeyn, Warbixinada CDC xaaladahaan “daba-dheeraada” ayaa ku soo shaac bixi karaan qaabab kala duwan, inta u dhexeeya neef-qabasho, daalka, xanuunka kalagoysyada ama isbeddelada dareen ilaa arrimo daran sida dhaawaca soo gaara xubno badan ama xaaladaha difaaca jirka. Context link
Iyadoo COVID-19 iyo hargab fidayaan deyrtan, tallaaladu waa kahortagga ugu fiican. Astaamaha lagu gartoCOVID-19, hargabka iyo riiraxyada ayaa noqon kara si la mid ah. Baaritaan ayaa laga yaabaa in loo baahdo si loo xaqiijiyo fayraska aad qabto. Talaalka loogu talagalay COVID-19 iyo hargabka, maskarada wajiga, kala fogaanshaha jireed iyo ku nagaanshaha guriga marka aadan caafimaad-qab ahayn ayaa muhiim u ah dhimista fiditaanka fayraskan.
Telehealth (Booqashooyinka Fogaan-aragga)
Cusbooneysintii Ugu Dambeysay: 02.07.2022 waqtiga 12:40 GALABNIMO CST